Sheekh Shariif iyo C/raxmaan Faroole oo digniin kasoo saaray arrimaha doorashada dalka (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Sheekh Shariif iyo C/raxmaan Faroole oo digniin kasoo saaray arrimaha doorashada dalka (AKHRISO)
Qaar ka mid ah musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda ayaa war-murtiyeed ay maanta soo saareen ku sheegay ilaa 6 qodob, kaas oo ay uga hadlayeen xaaladda dalka iyo doorashada sanadkaan dhici doonta.
Musharixiintaasi ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee dowladdii KMG ahayd Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ra’iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee maamulka Puntland C/raxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud (Faroole).
Mas’uuliyiintaasi ayaa war-murtiyooda ku xusnaa digniin ay u direen dalal aysan magacaabin, waxayna uga digeen inay joojinyaan fara-gelinta baahsan ay ku hayaan doorashada ka socoto dalka Soomaaliya.
War-murtiyeedka ayaa sidoo kale baaq loogu diray ciidamada nabad-sugidda qaranka iyo mas’uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana dhamaan loogu baaqay inay doorashada dalka dhex-dhexaad ka ahaadaan, islamarkaana aan lagu kicin fal musuq-maasuq ah.
Ugu dambeyntii, mas’uuliyiintaasi oo ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee ka taagan maamulka Galmudug ayaa ugu baaqay dhinacyada is-haaya inay dajiyaan xiisadaasi, islamarkaana sida uu qabo dastuurka maamul goboleedyadda dalka ku dhameeyaan waxkasto oo khilaaf ah.